Taliyaha Taraafikada oo ka hadlay diidmadii Ciidamadiisu Xuskii 29 Oct. ugu diideen Axmed-Siilaanyo | Somaliland.Org
Taliyaha Taraafikada oo ka hadlay diidmadii Ciidamadiisu Xuskii 29 Oct. ugu diideen Axmed-Siilaanyo
October 31, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Taliyaha Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka Somaliland Axmed Xasan Cabdiraxmaan (Ilka-case), ayaa ka hadlay falkii doraad Ciidanka Taraafikadu Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE kaga celiyeen munaasibad Madaxtooyada ka dhacaysay oo uu ka qaybgeli lahaa.
Taliyaha oo xalay khadka Telefoonka kula soo xidhiidhay Wargeyska Ogaal, waxa uu sheegay in arrintaas Axmed-Siilaanyo Madaxtooyada lagaga celiyay ay si khalad ah u dhacday oo ay ka raali gelinayaan bulshada reer Somaliland. “Xaflad tacsi iyo baroor-diiq ah bay ahayd oo loogu talogalay inuu ka qaybgalo, arrintuna mid haba yaraatee Ciidanka Nabadgelyada Wadooyinku shaqo ku leeyihiin may ahayn. Nin Sarkaal ah oo Taliye Kuxigeen ii ah baa joogay goobta laga celiyay ee Wasaaradda Maaliyadda horteeda, wuxuuna ninkaa sarkaalka ahi igu soo wargeliyay aniga, hoggaanka hawlaha iyo Taliyaha Ciidanka oo ku jirna Madaxtooyada, inuu joojiyay (gaadhiga Guddoomiyaha) oo la doonayay in sida baabuurta loo joojinayay in la hubiyo uun.…Waa Guddoomiye xisbi, waa nin muxtarimkiisa leh oo qiimo ku leh dalka, cid la odhan karo arrintaa (celintiisa) way ku talogashayna ma jirto,” ayuu yidhi Axmed-Ilkacase. Wuxuuna intaa raaciyay; “Markaa, arrintaas baan doonayaa in aan la buunbuunin oo aan si kale loo dhigin, iyadoo markii aanu masuuliyiinta ku wargelinayba – Telefoon loo diray (Guddoomiyaha) oo lala hadlay, isagana aad moodaysay inuu ka cadhooday askartaa garanaysay, haddana celisay. Markaa arrintaasi sababta noocaas ah bay u dhacday, si khaldana way u dhacday, cid raali ku ahaydna may jirin ama Taliye Ciidan ha noqoto ama masuuliyiintii Madaxtooyada joogtayba ha noqotee, cid aan arrintaa ka xumaanina ma jirto.”
Taliyuhu Ciidanka Taraafikada Somaliland waxa uu qiray in xilliyada qaarkood marka askarta waajib la siiyo ee meel loo diro, inay bulshada iyo masuuliyiinta si khaldan ula macaamilaan. “Markaa waxa loo baahan yahay in masuulka laftisu uu marmarka qaarkood ka dulqaato waxyaabaha qaarkood markay dhacaan oo noocaas oo kale ahi oo uu arko bal in talaabo laga qaado iyo sida wax looga qabto arrinta. Arrintaasina mid la siyaasadayn karo oo la odhan karo cid baa ka dambaysay maaha, balse waxay ahayd tacsi la imanayay…Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinku waa Ciidan shaqadiisa ku eg, inay cid ku xadgudbaana ugumaanu talogelin. Markaa waxaanu ka xaal siinaynaa bulshada reer Somaliland arrintaas oo si kama’ ah u dhacday, masuulkuna (Guddoomiyuhu) ay ahayd laftiisu inuu dulqaad muujiyo, ilayn dal dhan buu doonayaa inuu Madaxweyne ka noqdo’e,” ayuu yidhi Taliyaha Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka Somaliland.